Fifidianana Filankevi-Pitantanan’ny GV 2017: Nevin Thompson · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana Filankevi-Pitantanan'ny GV 2017: Nevin Thompson
Voadika ny 12 Marsa 2017 15:48 GMT
Izaho sy ny zanako roa lahy ao Japana.
Nevin Thompson no anarako ary voatendry hofidiana ho solontenan'ny ekipa (tonia) aho amin'ny fifidianana Filankevi-pitantanan'ny Global Voices hotontosaina amin'ny 16-20 Marsa 2017 (amin'ny faramparan'ity volana ity). Nanatevin-daharana ny Global Voices tamin'ny volana Jolay 2005 ho mpanoratra mpirotsaka an-tsitrapo momba an'i Japana aho, ary talanjona sy variana tamin'ny fitomboantsika nanomboka teo.
Miasa ho mpitantana media sosialy sy Tonian-dahatsoratra Japana aho ankehitriny, ary nanatevin-daharana vao haingana ny tetikasa NewFrames.
Solontenan'ny Tonia: Nahoana no Nevin?
Manantena aho fa hieritreritra hifidy ahy ho solontenan'ny tonia ao amin'ny Filankevi-pitantanan'ny GV ianareo. Misy antony roa no mahatonga ahy ho safidy tsara.
1. Manamora ny Fifandraisana
Noho ireo andraikitra isan-karazany sahaniko ato amin'ny Global Voices (ao amin'ny newsroom, ny ekipa media sosialy, sns.) Mahafantatra tsara ny fanamby sy ny fanararaotra omen'ny Global Voices ho an'ny ekipa aho.
Mifandray sy miara-miasa saika amin'ny tsirairay ao amin'ny ekipa ihany koa aho, ary nametraka fifandraisana tsara sy tsipi-pifandraisana amin'ireo olona ireo aho. Manampy amin'ny fifandraisana sy ny famahana olana izany.
2. Manampy ny Global Voices Hahatratra ny Heriny Manontolo
Niara-niasa tamin'ireo tsy mitady tombontsoa ara-bola sy ny birao tsy mitady tombontsoa ara-bola aho hatramin'ny taona 2004 ary ankehitriny dia miasa ho mpikambana amin'ny filankevi-pitantanan'ny fikambanana iray tsy mitady tombontsoa ara-bola ao Victoria, Kolombia Britanika, izay onenako.
Manana traikefa amin'ny resaka fitantanam-bola aho ary mahafantatra ny fomba fiasan'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa ara-bola. Hanampy amin'ny asa maha solontenan'ny ekipa tonia ihany koa ny traikefako amin'ny fampandrosoana tetikasa, ny fandrindrana tetikasa ary ny fitantanana ny filàn'ireo mpiara-miombon'antoka mpamatsy vola, no sady manaja ny soatoavina sy ny andraikitry ny Global Voices.
Farany, ny traikefako sy ny fifehezako ny fifandraisana miorina amin'ny aterineto ankehitriny dia hanampy amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fanomezana antoka fa hihamaro hatrany ny olona manerantany hamaky ny Global Voices.
Inona no Ataon'i Nevin ato Amin'ny Global Voices
Nanomboka tamin'ny Septambra 2014 aho no niasa ho Tonian-dahatsoratra Japana tato amin'ny Global Voices. Manampy amin'ny fitantanana ny media sosialin'ny Global Voices ihany koa aho, indrindra ny mailaka isan'andron'ny newsletter sy ny Facebook, ary nanatevin-daharana vao haingana ny ekipa NewsFrames.
Ankoatra ny fiarahako miasa amin'ny Global Voices, miasa ho mpanolotsaina ara-barotra sy copywriter ihany koa aho, indrindra indrindra eo amin'ny mpanjifa amin'ny lafiny fizahantany sy teknolojia.
Ny Lalan'asa Nodiavin'i Nevin
Nahafahako niova asa indroa ny fifindrana nonina tao Japana sy Canada nandritra ny roapolo taona farany. Nanomboka ho mpampianatra resaka sosialy teny amin'ny lisea aho ary avy eo niasa tamin'ny biraon'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa ara-bola, avy eo mpanolotsaina momba ny fampandrosoana ara-toekarena tao amin'ny governemanta. Ny ankamaroan'ny asako izay mirotsaka amin'ny fomba fitadiavan-dalana hamatsia ara-bola ny programan'ny governemanta dia mety hanampy amin'ny famahana ny olana manokan'ny fikambanana, manoratra tolo-kevitra hamoahana ny famatsiam-bola ary miasa sy mitarika ny famitàna ny tetikasa.
Tao anatin'izany, niasa ho mpanoratra aho (nametraka dikantsoratra Japoney ho amin'ny teny Anglisy tamin'ny fahitalavitra mihitsy aza aho nandritra ny fotoana elaela) alohan'ny nahalasa copywriter ara-barotra ahy sy nisahanako dokambarotra an'aterineto (marketing web) ahy tamin'ny taona 2010. Satria nianatra zavatra maro momba ny marketing antserasera aho nandritra ny enina na fito taona, nahafahako monina na aiza na aiza ny asako, anisan'izany i Japana izay iarahako amin'ny fianakaviako isaky ny telo volana isantaona.
Azo jerena ato ny mombamomba ahy ao amin'ny LinkedIn sy ny antsipirihany bebe kokoa momba ny tantaran'ny asako.
Mifandraisa Alohan'ny Hifidiananao
Averiko indray, hotontosaina amin'ny 16-20 Marsa 2017 ny fifidianana filankevi-pitantanana ato amin'ny Global Voices (faramparan'ity volana ity). Afaka mifandray amiko mivantana ao amin'ny pejim-pifandraisana ianao, angataho namana ao amin'ny Facebook aho, na araho ao amin'ny Twitter @nevin_thompson.